Ii-Intro ezinokuHlela emva kweZiphumo, iiwebhusayithi ezinokukhutshelwa kunye nabahleli | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJorge Neira | | Izixhobo zoYilo, Izibonelelo
Njengoko usazi, iAdobe emva kweziphumo sesinye sezixhobo ezilungileyo zokusebenza kwicandelo leziphumo ezizodwa kunye nemveliso yedijithali emva. Enye yezona zinto zinomtsalane kunayo Ukubanakho ukulawula ukukhanya kweesuntswana okanye ukusebenza kuyilo lwe-3D kwaye ikwasivumela ukuba sidibanise ukusetyenziswa kwayo ngokugqibeleleyo nasiphi na isixhobo sokwakha esivela kwiAdobe. Sinokungenisa ngokulula iifayile kwiPsd okanye kwifomathi yeAi umzekelo kwaye usebenze kuzo, usebenza ngamanqanaba, iimaski zomaleko, iindlela zokudibanisa ...
Kuyo yonke le nto, iAdobe emva kweZiphumo zinokuba luncedo kakhulu ekwenzeni izihloko, ii-intros zenkqubo, iibhlog zevidiyo okanye izihloko zekhredithi. Ukuguquguquka kwayo kunye nokufana kwaso nasiphi na isixhobo seAdobe kusenza ukuba sibe sisixhobo esinomdla kakhulu, nangona inqanaba lobunzulu okanye ukuntsokotha kwalo kuyamangalisa. Ke ihlala ilungile uneengxelo xa usenza iiprojekthi ezintsha kwaye kutheni kungenjalo, isikhokelo sokusebenza.
Ke ndiyakushiya intros ezilishumi ezinokuhlelwa kwaye zikhutshelwe enokusetyenziselwa ukukhuthaza okanye ukusebenza kuyo, uyihlele kwaye usebenzise iprojekthi eyenziweyo ukongeza uhlengahlengiso okanye ubone ulwakhiwo lwayo ukuqonda ngcono ukusebenza kwayo. Kum ngokwam, ngakumbi kwiziqalo zam zokuqala nesicelo, kwakuluncedo kakhulu ekusebenzeni kunye neeprojekthi ezinokuhlelwa. Inxalenye elungileyo yokhetho ikhutshiwe kwiphepha Iitemplate zeDS apho kukho izibonelelo ezaneleyo ezinokuba luncedo kakhulu.
Intshayelelo yeHold Man Hologram
I-Intro Buller Shoot
Iimpawu zecandelo eliqaqambileyo
1 IiWebhusayithi zokukhuphela ii-intro ezihlelayo
1.2 Iitemplate ze99
1.6 Uluhlu lokuhamba
2 Iinkqubo zokwenza ii-intros ezinokuhlelwa
2.2 Movie Maker
2.3 Ukukhanya kweWindows, iMacOS, kunye neLinux
2.5 Umhleli weVSDC yasimahla yeVidiyo
3 Ii-intro ezinokuhlelwa kwi-youtube
3.2 Umenzi wentetho yasimahla
IiWebhusayithi zokukhuphela ii-intro ezihlelayo
Kubalulekile xa uqala ngentsha ividiyo, iprojekthi okanye intetho, Yiba nesingeniso esichaza isitayile sakho kunye nophawu lwakho kwaye isingeniso somgangatho sithatha ixesha elininzi kunye nolwazi esingasoloko sinalo.
Ngenxa yoko sinenani elikhulu leziza apho sinakho Khuphela iitemplate ezinokuhlelwa.
Ezi templates, ngokubanzi, zinomgangatho ophezulu kwaye ngonqakrazo nje oluncinci ungazenza kunye nelogo yakho, iitekisi, njl, ukufumana isingeniso esifanelekileyo sevidiyo zakho ngexesha elifutshane kakhulu.
Apha ngezantsi ndikubonisa ezinye zezi webhusayithi nge uninzi lwasimahla kunye nomxholo wepremiyamu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeengcungcu ezikolu shishino. IVideoBlocks ineetemplate ezingaphezulu kwama-7.000 ezikhoyo yokukhuphela, onokuyisebenzisa ngaphandle kwengxaki kuba bonke banelayisensi evumela ukusetyenziswa kwabo ngaphandle kwesithintelo.
Ngenye yeekhathalogu ezinkulu kwi iikhompyutheni zamahhala Iitemplate ezingama-99 zinikezelwe kwiwebhu, yenye yezona webhusayithi zibalaseleyo, ukongeza ekusiboneleleni ngeendlela ezahlukeneyo, ibonisa oko Izinto zakho zisimahla ukuba uzisebenzise. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa ikwasinika noncedo simahla ukuba sinemibuzo okanye iingxaki ngelixa sisebenzisa nayiphi na itemplate.
Indawo enkulu apho uza kufumana uluhlu olubanzi lweetemplate simahla, kubandakanya I-intros eneziphumo ezilungileyo kakhulu.
Enye ye iiwebhusayithi ekubhekiswa kuzo ekukhupheleni itemplate, Ngeentlobo ngeentlobo kunye nomgangatho olungileyo oqinisekisiweyo, kuba zezikaShutterstock ezinkulu.
Ukongeza kwiifayile zayo zasimahla, ukuba unohlahlo-lwabiwo mali, qiniseka ukutyelela indawo enomdla kuyo kunye neziqwenga phakathi kwe-approx. I-30 kunye ne-40 yeeYuro ukutshintsha.
Indawo epholile yokukhuphela itemplate, nangona kunjalo ayinazo iitemplate zasimahla ze-intros, sinokufumana isitayile ebesisikhangela kwizindululo zakho zokuhlawula.
Nangona iwebhusayithi yeNkulumbuso ukuqala kwayo, ineetemplate zasimahla ezethululwayo ezikhoyo kwikhathalogu yayo kwaye kunjalo ineendlela ezahlukeneyo zobhaliso, ezisusela kukhetho lwasimahla olukuvumela ukuba ukhuphele kwi-PRO, ethi yona malunga nama-euro angama-45 ikunike ukhuphelo ukuya kuthi ga kwi-20 ngenyanga.
Enye yeengxilimbela zevidiyo, ene Iziphumo zeekliphu ezingama-23.000 zesingeniso kunye nesiqingatha sezigidi zeefayile ezifumanekayo ekusebenziseni nasekuvuseleleni.
Ngeli xesha, itemplate ezikhoyo ziyahlawulwa, ukusukela malunga neeyuro ezi-4 zokutshintsha, kodwa ngaphandle koko, iindidi zinkulu kakhulu, ke sicebisa ukuba ujonge kuba uluhlu lwamaxabiso alulukhulu kwaye unokufumana iziqwenga ngomgangatho olungileyo kunye neziphumo.
Iinkqubo zokwenza ii-intros ezinokuhlelwa
IMovie yenzelwe ngokukodwa iApple kwaye omnye wabahleli abanomdla kakhulu kwiividiyo, ukuhambelana nazo zonke iiMac kwaye kunokusetyenziswa rhoqo.
Isoftware yamva ivumela uninzi ukhetho olungcono oluphambili, njengokuhlela okungu-4K kunye nezinye iiklip zevidiyo ezivela kwizixhobo zangaphandle, ezinjengeekhamera zeGoPro kunye neefowuni eziphathwayo, siyinto esiyithandayo ujongano lwayo kulula ukuyisebenzisa, icocekile kwaye inomdla.
Elinye inqaku elifanelekileyo kukuba ungahlela kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad yakho. Kukho ezinye iindlela zokukhuphela ezinye izinto kwiYouTube okanye kuFacebook kwaye ungayenza ngeendlela ezahlukeneyo, ukusukela le nkqubo inomhleli osisiseko Kwisandi, ngamafutshane, lo mhleli ugqibelele ekwenzeni iividiyo zasekhaya kunye neeprojekthi ezincinci zokumamela.
Esi sixhobo sibandakanyiwe kwiWindows kwaye nangona ayizi nge Windows 10, Kulula ukukhuphela ukwenza iividiyo zoqobo. Iziphumo ziyafana kakhulu nezo ze I-CutPro yokugqibela kunye ne-Adobe Premiere Pro.
Phakathi kwezinto ezitsala umdla wethu malunga noMenzi bhanyabhanya weWindows yinto enokwenzeka Hlanganisa iividiyo, iaudiyo kunye nemifanekiso, Sika iividiyo kwaye ungeze iziphumo ezizodwa. Xa ufaka ikliphu yakho kunxibelelwano lwasentlalweni kulula kakhulu kwaye kwiiprojekthi ezincinci zilungile, nangona kucacile ukusikelwa umda kobungcali xa siyithelekisa nezinye iindlela zokuhlawula.
Ukukhanya kweWindows, iMacOS, kunye neLinux
Imisebenzi yokukhanya ikhona enye yeenkqubo ezilungileyo ibandakanyiwe kolu luhlu, njengoko le nkqubo yokuhlela ividiyo isetyenziswe ngokubanzi ukuvelisa iifilimu eziphezulu ezinje nge-LA eyimfihlo, iWolf yaseWall Street kunye nePulp Fiction.
Ukujonga ngononophelo kwiimpawu zayo, lo mhleli unezilungiso zombala, iziphumo ezoyikekayo, ubuchwephesha bobuchwephesha kunye nolunye uhlobo lweendaba.
Unenguqulo yasimahla kunye nohlobo oluhlawulelweyo ukuze ukwazi ukuthumela ngaphandle iifayile ze-MPED-4 ngesisombululo se-720p. Imisebenzi yokukhanya nayo inikeza ezinye izixhobo zohlobo lwemveli ukungenisa ngaphakathi, ukusika kunye nokuhlela kwaye into elungileyo kukuba uyenze ngonqakrazo olumbalwa.
Olu lolunye ukhetho lwefashoni yokuhlela iividiyo ezimfutshane, kuba unethuba lokwenza njalo ukunciphisa, ishedyuli kunye nokucoca kwaye imenyu yayo yobuhlobo ikuvumela ukuba ulawule inani lemisebenzi ebalulekileyo.
Enye inzuzo kukuba ayithathi indawo enkulu kwikhompyuter yakho, ngokungafaniyo nezinye iinkqubo ezikuluhlu. Kukho nezandiso ezahlukeneyo zokugcina umsebenzi wakho.
Umhleli weVSDC yasimahla yeVidiyo
Yiyo isixhobo esihle kakhulu sokuhlela Kwaye nangona ingeyorhwebo kakhulu, inesakhono esikhulu sokuhlela kunye nesixhobo esibonakalayo esilula. Sifuna ukukuxwayisa ukuba Inkxaso yale nkqubo ayihlawulelwa, kodwa umhleli unamandla okuphatha ukukhanya, ukusetyenziswa kweefilitha, kunye nolunye utshintsho.
Sithanda isoftware eyilwe kakuhle kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ngaba iyahambelana nefomathi ye-AVI kunye ne-MAP4 Ukuze ube nefuthe ngakumbi kwividiyo nakwifayile eziphumo, ungazigcina kwiselfowuni okanye kwikhonsoli.
Ii-intro ezinokuhlelwa kwi-youtube
I-YouTube yiyo eyona nto iphambili ekuboniseni iividiyo buqu okanye ishishini kwaye ukuba uza kukhetha ukwenza ii-Intros, kufuneka zibe kumgangatho olungileyo. Emva koko, sibonisa amaphepha kunye neenkqubo zokudala ii-Intros zoqobo, uninzi lwazo simahla.
Le yenye zezona ndawo zibalaseleyo zokwenza kunye nokuhlela isingeniso sakho kwi-intanethi kwiinethiwekhi zakho zentlalo ezinjengeYouTube kwaye unokubandakanya isicatshulwa kunye nomfanekiso.
Ininzi into onokuyenza, njengokufaka kunye nokufaka iividiyo ezikumgangatho ophezulu kunye nokukhetha ukubukela ngaphambi kokupapasha. Unayo ifayile ye- ukhetho lokulayisha iaudiyo yakho ngeefomathi ezinjengeMP4 okanye nayiphi na ifomathi okhoyo.
Umenzi wentetho yasimahla
Umenzi we-Intro wasimahla ukwindawo ebonakalayo yokwenza iividiyo kwaye simahla, kodwa ayisiyonto iphazamisayo kwinkangeleko yobungcali kunye nenhle, ikwayiyo Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ukhetha umxholo, ukhetha isihloko, izinto, imifanekiso, i-URL, njl.
Unokuba nefayile ye- imbonakalo wento oyenzayo emva koko ukhuphele ikhompyuter yakho kwiinethiwekhi zentlalo.
Enye indawo elungileyo yokwenza Ukuhlela ii-intro kwaye ujongeka enobungcali kakhulu. Ungafaka ilogo yakho, ikhadi, iikhredithi nokunye okuninzi, ngaphandle kwenkqubo yokuba yenye yeentandokazi zam, kuba ungabona ividiyo ngaphambi kokukhuphela.
Iividiyo zikaPanzoid zibukeka zintle, kunye nomgangatho wobungcali kwaye into elungileyo kukuba into nganye inokwenziwa ibe yeyomntu. Isixhobo sifakiwe 3d oopopayi eyamkelekileyo, isixhobo ekufanele ukuba sisetyenziswe.
Kwakhona isoftware kuhle kakhulu ukwenza iividiyo kwaye uzithumele kwi-YouTube. Zonke izinto zingenziwa ngokwezifiso kwaye uya kubakholisa abahlobo bakho kunye nabalandeli beenethiwekhi zakho.
Sithanda i-Intromaker.net yayo umgangatho xa usenza isingeniso sakho Kwaye kunye neelogo zoopopayi kunye nezinye izixhobo ezichazwe apha ngasentla, unethuba lokuba nemisebenzi eyahlukeneyo yokwenza ubuwena: iilogo, iividiyo kunye nezinye izinto oopopayi, isiphumo somsebenzi sobungcali kwaye into elungileyo kukuba ungasebenzisa ukuya kuthi ga kwisibini iividiyo zeprojekthi yakho.
Eli liphepha lokwenza ii-Intros zasimahla ezikunika ithuba lokuba wenze i-intro yakho umgangatho ophezulu kunye nelogo zoopopayi.
Banikezela ngemisebenzi eyahlukeneyo enje ulwenziwo ngokwezifiso kwividiyo okanye oopopayi. Ukongeza, yongeza ukuchukumisa kobungcali kwiividiyo, ukufikelela kwiziphumo ezingcono, ngaphandle kwenyani yokuba ikwavumela ukuba usebenzise iividiyo ezimbini zeprojekthi yakho.
Kucacile ukuba sonke siyathanda bukela iividiyo kunye neemovie kuba kuyonwabisa ngaphezu kokufunda iphephandaba, kodwa inkqubo yokuhlela yinto ekruqulayo kwaye eyindinisa, umsebenzi othetha iiyure zokuzinikela kwaye ngamanye amaxesha ujika ubize kakhulu.
Ukuba uphakathi kwale nkqubo, sinethemba lokuba ngazo zonke iindlela ezizezinye ze esikunike lona (uninzi lwazo simahla okanye Ngexabiso eliphantsi kakhulu), ukwazile ukukhuphela ii-intro ezinokuhlelwa okanye wenze enye kwasekuqaleni. Ngaba uyazi izixhobo ezingakumbi zokwenza ii-intros zevidiyo ezihleliweyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Ii-Intros ezinokulungiswa zeAdobe emva kweZiphumo
kuyamangalisa ... enkosi kakhulu ...
UAle Dany sitsho
Phendula ku-Ale Dany
zinokusetyenziswa ngaphandle kwemicimbi yelungelo lokushicilela?
UMaricortez Fenoglio sitsho
molo ndinga khuphela phi itemplate zeevidiyo ze-magix
Phendula uMaricortez Fenoglio
majo gonzalez sitsho
musa ukukhuphela ukukhohlisa kuphela
Phendula majo gonzalez
IINKCUKACHA ZEENKQUBO NGAZO I-NOBRE OBUKHANGELA KWI-DS TEMPLATE PAGE
Iifonti zasimahla zeSerif zenyanga ka-Agasti